Atirishada Bollywood-ka ka tirsan Esha Gupta oo Alex Iwobi ku tilmaantay Daanyeer | Bakool.net
Home / CAYAARAHA / Atirishada Bollywood-ka ka tirsan Esha Gupta oo Alex Iwobi ku tilmaantay Daanyeer
Atirishada Bollywood-ka ka tirsan Esha Gupta oo Alex Iwobi ku tilmaantay Daanyeer
Atirishada Bollywood-ka ka tirsan Esha Gupta ayaa aflagaado ku saleesan cunsurinimo u geesatay cayaaryahanka kooxda Arsenal u cayaaro una dhashay dalka Nigeria Alex Iwobi.
Baraha bulshada ayaa siweyn loogu weeraray Esha Gupta oo Arsenal taageero u ah kadib markii lasoo dhigay fariin qoraaleed ay si dhaafsadeen qof taageero u ah Arsenal barta Instagram-ka isku dhaasfsadeen waxaana qoraalada Esha ku jiray inay Alex Iwobi ku tilmaantay Danyeer ma gudbe ah!
Esha Gupta oo ah taageero Arsenal mayal adag sidoo kalena marar kala duwan garoonka Emirates soo booqatay ayaa ka carootay guuldaradii 3-1 kooxdeeda Arsenal kala kulantay Man United Jimcadii aan kasoo gudubnay kulan ka tirsanaa FA Cup-ka.
Esha Gupta oo 33-jir ah waxay barta Instagram-ka ku leeyahay 3.4-milyan oo saaxiibo ah halka Twitter-ka ay ku leedahay 412,000 oo saaxiibo ah balse dhamaantooda xidigtan ayay ku kaceen madaama ay Alex Iwobi ku tilmaantay Danyeer nooca Gorilla loo yaqaan.
Qoraalka Esha Gupta iyo qof taageero Arsenal u ah is dhaafsadeen asigoo turjuman hoos kaga bogo wuxuu ahaa qoraal WhatsApp la isugu diray laakiin Instagram-ka ay si ku tala gal ah Esha gupta usoo dhigtay kadibna meel walbo ku faafay:
Qoraalka Esha Gupta:
Xal waa in loo helaa cayaartooyda garbaha nooga cayaaraan.
Ma arki kari midka wajiga Gorilla-ha leh kaasi oo garbaha ka ordo
Waa shaqsi aad u xun oo aan waxba tareyn
Qoraalka loogu jawaab celiyay (Varun_Gupta17)
Anigaba daacad ahaan waan kula qabaa midaas, balse maxay keed u galin waayeen.
Waxaan u maleynaa isbadalkii muuqaaleed ku socday inuu istaagay
Weli iskama uusan badalin Neanderthal mana uusan noqonin bini aadan!!!
Neanderthal: waa nooc ka mid ah noolihii dunidan soo maray ee bini aadanka aad uga duwanaa sidoo kalena Daanyeer aan ahayn waxaa lagu saleeyaa isbadalada bini aadanka fikradii Charles Darwin qayb ka ah in bini aadanka Daanyeer marxalado badan oo isbadal ah soo maray waa aragtidii Charles Darwin.
Esha Gupta waxay la kulantay dhaliil xoogan ayadoo lagu tilmaamay qof cusuri ah sidoo kalena aan tixgalin bini aadanka madaama Alex Iwobi ku tilmaantay Daanyeer aan is badalin oo aan Bini aadan weli noqonin!
Previous: Madaxweyne Laftagareen oo Garoowe kula kulmay bulshada deegaanada K/Galbeed
Next: Wasiir ku xigeenka Amniga Gudaha XFS oo Jabuuti uga qeyb galay Furitaanka Tababar aqoon isweydaarsi